२१ करोड लगानीमा खानेपानी आयोजना बन्दै
पाँचथर । जिल्लाको साविकका दुई गाविसलाई लक्षित गरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको रू. २१ करोडभन्दा बढी लागतमा फिदिम नगरपालिका–९, लुम्फाबुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिका–१, नवमीडाँडामा खानेपानी पुर्‍याउन लागेको हो । यसका लागि ‘लुम्फाबुङ–नवमीडाँडा लिफ्ट खानेपानी आयोजना’को गत शनिवार शिलान्यास गरिएको छ । आयोजनाको प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले शिलान्यास गरेका हुन् ।
आयोजना अन्तर्गत निभुखोलाको पानी लिफ्टिङ प्रविधिमार्फत गाउँसम्म ल्याएर विवतरण गरिनेछ । आयोजनाबाट ८४४ घरधुरीका ३ हजार ९७७ बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् । २०७८ असार २९ गते सम्पन्न गर्नेगरी खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पाँचथर र स्वामी नारायण–आशीर्वाद जेभीबीच गत असार २० गते नै सम्झौता भइसकेको छ ।
आयोजनाको कुल लागत रू. २१ करोड २० लाख ७२ हजार रहेको छ । उक्त बजेट प्रदेश १ सरकारले विनियोजन गरेको हो । आयोजनाको ट्रान्समिशन पाइप लाइन १० दशमलव ५६ किलोमिटर र वितरण पाइप लाइन १४ दशमलव ७२ किलोमिटर रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले बताएको छ ।
आयोजनाको शिलान्यास गर्दै प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले आयोजना बनेपछि लुम्फाबुङ र नवमीडाँडामा खानेपानी समस्याको समाधान हुने बताए । आयोजना सम्पन्न गर्न सबै पक्षले रचनात्मक सहयोग गर्न समेत उनले आग्रह गरे ।
बेनी–जोमसोम सडक अझै खुलेन
म्याग्दी (अस) । गत आइतवारदेखि अवरुद्ध बेनी–जोमसोम सडक मर्मत हुन नसक्दा सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने उक्त सडक सुचारु नहुँदा स्थानीयको दिनचर्या प्रभावित भएको छ । सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङको सिमाना घोप्टेभीरस्थित कालीगण्डकी नदीको कटानले सडकमा क्षति पुगेपछि यातायात अवरुद्ध भएको हो ।
पहिरोले सडकको करीब १० मिटर सडकको आधार नै भत्काएको छ । अहिले विष्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी नयाँ ट्र्याक निर्माणको तयारी गरिएको छ । डोजरको सहायताले मात्रै ट्र्याक निर्माण नभएपछि विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्ने तयारी भएको बेनी–जोमसोम कोरला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रमान शेरचनले जानकारी दिए । उनका अनुसार भत्किएको सडक मर्मतको काम भइरहेको छ ।
जन्मथलोको विकासमा प्रधानमन्त्रीको चासोले स्थानीय उत्साहित[२०७६ माघ, ७]
पाँचथरका स्थानीय तहमा करोडौं बेरुजू 
पाँचथरमा अदुवाको मूल्य २ गुणा बढ्यो
‘काबेली बी वान’को उत्पादन शुरू
‘काबेली बी वान’को नियमित उत्पादन शुरु, २५ मेवा विद्युत केन्द्रिय प्रसारण लाइनमा थपियो